April 2022 - Newposts
မုန်း၍ လည်းကျိန်စာ မတိုက်နဲ့ ချစ်ခင်၍လည်း နောက် ဘဝပြန်တွေ့ ပါရစေ ဆုမတောင်း ပါနဲ့ ….
April 30, 2022 newposts2021 0
မုန်း၍ လည်းက်ိန္စာ မတိုက္နဲ့ ခ်စ္ခင်၍လည်း နောက် ဘဝျပန်တြေ့ ပါရေစ ဆုမေတာင်း ပါနဲ့ ဘယ်သောအခါမွ မုန်း၍လည်း က်ိန္စာ မတိုက္ပါနွင့် ခ်စ္ခင် ၍လည်း နောက္ဘဝျပန်တြေ့ပါရေစ ဆုမေတာင်းကြ ပါနဲ့ ကံ ကံ၏ အက်ိုးရယ် သံသရာ ဆိုတာ ကိုရယ် ယုံကြည် […]
မန်တလေးမှာလပွေငျးတိုကျမှုရုပျသံဖိုငျနှငျ့ တောငျသူကွီးတှအေတှကျ တိကစြှာ ခနျ့မှနျးပေးလိုကျတဲ့ ပွညျသူခဈြစုစုစံ
မန္တလေးမှာလေပြင်းတိုက်မှုရုပ်သံဖိုင်နှင့် တောင်သူကြီးတွေအတွက် တိကျစွာ ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ ပြည်သူချစ်စုစုစံ ရုပ်သံဖိုင်ကိုအောက်ဆုံးမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်…. ဇေယျဝတီ ဖြူး ကညွှတ်ကွင်း ပဲနွယ်ကုန်း လေမိုး လျှပ်စီးမိုးကြိုးမိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 21kA (Strong slammer), Date: 30/04/2022, Time: 03:37:31pm အင်းလေး […]
မုန်တိုင်း လျှပ်စီးမိုးကြိုးနှင့် ရုတ်တရက်လေပြင်းအန္တရာယ်သတိပြုရန်နှင့်တစ်ပတ်အတွင်းမိုးကြီးမည့်ဒေသများ
မုန်တိုင်း လျှပ်စီးမိုးကြိုးနှင့် ရုတ်တရက်လေပြင်းအန္တရာယ်သတိပြုရန်နှင့်တစ်ပတ်အတွင်းမိုးကြီးမည့်ဒေသများ မုန်တိုင်းများနှင့် အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ၂၀၂၂ မေလ၅ရက်နေ့မှ ၁၁ရက်နေ့အတွင်း မုန်တိုင်းတစ်လုံး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အလားအလာများနေပါတယ် မေလ ၁၂ရက်နေ့မှ ၁၈ရက်နေ့အတွင်းမှာလည်း နောက်ထပ် မုန်တိုင်းတစ်လုံး ထပ်မံဖြစ်နိုင်ပြန်ပါတယ် မေလ ၁၉ရက်နေ့မှ ၂၅ရက်နေ့အတွင်းမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တနင်္သာရီတိုင်းကြီးကို အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေ […]
30/04/2022 မှ ၂၄နာရီအတှငျး မိုးတှရှေယျဝုနျးပွီး မိုးကွီးနိုငျတဲ့ ဒသေမြား
မင်းကွန်း ခိုတောင် စစ်ကိုင်း မန္တလေး လေမိုး လျှပ်စီးမိုးကြိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 46kA (Angry rourer), Date: 30/04/2022, Time: 01:19:06pm မတ္တရာ လေမိုး လျှပ်စီးမိုးကြိုး ⛈⛈⛈⛈ Lightning: Cloud to […]
ကျောက်ချဉ် နဲ့ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ ရောဂါ အမျိူး(၂၀)
ကျောက်ချဉ် နဲ့ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ ရောဂါ အမျိူး(၂၀) ကျောက်ချဉ် ကနေ ရရှိ နိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုး ကျေးဇူး နှင့် အသုံးဝင် ပုံများကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ( ၁ ) ခံတွင်း အနာတွေကို သက် သာ စေခြင်း – ပါးစပ်ထဲမှာ […]
နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှအပ နည်းလမ်းတွေ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် ရှိရင်တောင် အသက် ၃၅ နှစ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် နုပျိုကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နုပျိုရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို love media ကနေ ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်နော်။ […]
သင့်ဆီမှာရှိတဲ့ မှဲ့တွေ ကပြောတဲ့ သင့်အကြောင်း
1 ) နဖူးပြင်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ ရှိခဲ့လျှင် ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ အစွပ်အစွဲ ခံရတတ်သည်။ ပူပင်သောက များလိမ့်မည်။ မိမိတွင် ရှိ သည်ထက်ပို၍ လူအများက ချမ်းသာသည် ဟု ထင်မြင်တတ်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခနှင့် တွေ့ရတတ်ပါသည် ။2) ညာဘက် မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင် […]
ဘဏ်ယူနီဖောင်းမဝတ်ထားလဲ ဘဏ်မှာလုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဘယ်ဘဏ်လဲဆိုတာ တန်းသိတဲ့ နည်းလမ်း
ဘဏ်ယူနီဖောင်းမဝတ္ထားလဲ ဘဏ္မွာလုပ္တယ္ဆိုတာနဲ့ ဘယ္ဘဏ္လဲဆိုတာ တန်းသိတဲ့ နည်းလမ်း အျပင်ဝတ္စုံ ဝတ္ထားလဲ ဘဏ္မွာလုပ္တယ္ဆိုတာနဲ့ ဘယ္ဘဏ္လဲဆိုတာ တန်းသိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ္ခန့်ရင် တဘဏ္နဲ့တဘဏ် ဖီးခ်ာျးခင်းမတူကြဘူး။ မိတ္ကပ်အမ်ားကြီးနဲ့ ဖင္ကားမယ္ဆို KBZ လူစင္မမွီဂ်ပုမ ဖင်ကောက် ( ကောက္တာနော် ကားတာနဲ့မတူ ) စာတြေဘာတြေဖတ် […]
ရိုင်းပျဆိုးသွမ်းနေတဲ့ ကလေးတွေကို လိမ္မာယဉ်ကျေးလာအောင် ဒီအချက် (၇) ချက်ကို သင်ကြားပေးပါ
အခ်ို့ကေလးတြေက တဇြတ္ထိုးလုပ္တတ်ပြီး မိသားစုတြေကိုသာမက အျခားသူတြေအေပ်ါမွာလည်း ရိုင်းရိုင်းပ်ပ် ဆက္ဆံတတ်ကြပါတယ်။ ရိုင်းပ်တဲ့အက်င့္က ငယ်ရယ္စြဉ်အခ်ိန္မျွာပျုပင္ဖို့ လြယ္ကူပါတယ်။ ၁။ တည္တည်ငြိမ်ငြိမ်ျေပာဆိုပါ။ သင့္ကလေးက ရိုင်းပ်နေရင် သင္ကိုယ္တိုင္က ဒေါသအေလ်ာက်ျေပာမိဆိုမိသြားမွာပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ဒေါသေတြကို ကေလးအေပ်ါပုံခ်လိုက္တာကျေဖရွင်းတဲ့နည်းလမ်း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒေါသေတြ အရမ်းထြက်နေရင် […]
ဘယ်သောအခါမွမကြီးပြားနိုင်သည့်သားသမီးအမ်ိုးအစားမ်ား…. (၁)မိဘကိုအိမ်စောင့္ထာျးခင်း။ (၂)မိဘကအဝတ်လွေ်္ဖာတ်ြပေးရျခင်း။ (၃)မိဘကသားသမီျးပန္လာလ်ွင်ခြံတံခါးဖြင့်ပေးရျခင်း။ (၄)မိဘကိုသားသမီးထိန်းခိုင်ျးခင်း။ (၅)မိဘကထမင်းခ်က်ျပုတ်ကျြေးမြေးရျခင်း။ (၆)မိဘကိုလစာပေးသလိုမ်ိုးငြေပျးခင်း။ (၇)မိဘအမွာျးပုလ်ွင္လူရွေ့သူရွေ့ဆူပူအျပစ္တင်ျခင်း။ (၈)မိဘကဘုရားရွိခိုးလ်ွင္က်ယ်ျခင်းတိုျးခင်းကိုကဲ့ရျဲ့ခင်း။ (၉)မိဘကို မောင္နွမလိုသေဘာထားဆက္ဆျံခင်း။ (၁ဝ)မိဘကို နွေမ်ာတြန့္တို ပေးကမ်ျးခင်း။ (၁၁)မိဘစကားကိုပစ္ပယ်ျခင်းအေလးမထာျးခင်းဒါမ်ိုးတြေကို ရွောင်ရွားကြပါ၊ ဆင်ျခင်ကြပါမလုပ္မိကြပါစေနဲ့မိဘဆိုတာအစားထိုးမရနိုင္တဲ့တန္ဖိုးအကြီးမားဆုံးရတနာပါ ။ ဘယ်သောအခါမွမကြီးပြားနိုင်သည့်သားသမီးအမ်ိုးအစားမ်ား…. (၁)မိဘကိုအိမ်စောင့္ထာျးခင်း။ (၂)မိဘကအဝတ်လွေ်္ဖာတ်ြပေးရျခင်း။ (၃)မိဘကသားသမီျးပန္လာလ်ွင်ခြံတံခါးဖြင့်ပေးရျခင်း။ (၄)မိဘကိုသားသမီးထိန်းခိုင်ျးခင်း။ (၅)မိဘကထမင်းခ်က်ျပုတ်ကျြေးမြေးရျခင်း။ (၆)မိဘကိုလစာပေးသလိုမ်ိုးငြေပျးခင်း။ […]